Miantso ny FFKM sy ny CNOSC hanelanelana Ravalomanana ! – MyDago.com aime Madagascar
Miantso ny FFKM sy ny CNOSC hanelanelana Ravalomanana !
Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby teto amin’ny Magro Behoririka ny filoham-pirenena Ravalomanana ny Zoma 22 Aprily 2011. Tamin’izany no nandefasany hafatra sy firarian-tsoa noho izao fankalazana ny Paska izao, « ho paska ieren-doza anie ity Paska 2011 ity » hoy izy.
Mahakasika ny toe-draharaham-pirenena idray dia nanao antso avo amin’ny raiamandreny eto amin’ny firenena izy hanelenelana amin’izao krizy izao fa mijaly ny vahoaka. « miantso ny FFKM sy ny CNOSC aho tsy hitazam-potsiny ny manjo ny firenena » hoy ramose.
Fa ankoatra izay, nanao tolo-tanana ho any i Rev Andrianalijaona Andriamanampy na Satrobory ihany koa ny vahoaka teo Behoririka , nahatratra 87.220 Ariary ny tsipaipaika ho fanampiana azy amin’ny vidim-panafody.Araka ny fantatra ihany koa dia efa nivoaka ny hopitaly ny “ben-tananan’I Magro” fa mbola manaraka fitsaboana any an-trano amin’izao fotoana izao.
Tamin’ireo laha-teny maro heno teto an-kianja ihany koa dia niarahaba ny mpiara-mitolona amin’izao fetin’ny Paska izao I Pasitera Edouard :”hitondra fandresena ho antsika anie ity paska ity” hoy izy.
Ny depioté voafidy tany Faratsiho kosa indray dia namaky bantsilana an’I Andry Rajoelina, manana zo hahalala izay halehanao ny vahoaka hoy Henri Rasolonjatovo koa maninona no tsy lazaina fa lasa nitsangatsangana ianao ary fantatra ihany koa hoy izy fa manana “jet privé “I Andry TGV saingy nosoratany amin’ny anaran’olon-kafa izany .Ampatsiahivina etoana anefa ny fanenjehina ny filoha Ravalomanana teny amin’ny 13 mai momba ny air force one ?hoy izy.
Tonga masiaka ihany koa tamin’ny kabary nataony I Mektoub androany.Tandremo hoy izy fa fa ireny fihetsika diplomatika nataony ireny no manala ny sazy, soa fa ny an’ny amerikana no tonga aloha ny filazana fa tsy manaja ny zon’olom-belona sy ny zo fototra ny FAT. Demokrasia ve no dradradraina kanefa dia potehana ny entan’ny talen’ny radio Fahazavana ? Namabarany ihany koa ny famarotan’ny FAT ny Tanindrazana .Ariary enina no vidiny ny tany malagasy ivarotan’ny FAT ho any ny karana, tsy mahagaga raha mateti-piavy ny masoivohony satria dia paradisa i Madagasikara. Ary ny karana no manangona ny entana eto dia mandafo avy eo mba ho mora ny vidiny avy eo.
Rakotovazaha Olivier kosa dia nilaza fa tapitra ny resaka rehefa I Jakob Zuma no tsy mety nandray an’I Andry Rajoelina tamin’ny diany farany teo. Tsy hisy hankatoa ny ao amin’ny SADC hoy izy. Sarotra ho any Simao no miverina eto satria na ny iraka teto aza efa lasa nody. Ho tsara ho antsika ity volana May ity ary eo no mety ho TSAR mihitsy hoy ity “Mafana” ity.
Ny Printsy Elakovelo avy amin’ny ankolafy Ratsiraka dia nanambara fa sahy miteny ny ankolafy telo hoy izy fa raha mbola tsy eken’ireo filoha telolahy izy ireo dia tsy hahazo ny fankatoavana iraisam-pirenena mihitsy.
Samia mivavaka kokoa ary hamafiso ny tolona hoy ny hafatry ny filoha Didier Ratsiraka nentin’I Printsy Elakovelo teto. Matokisa anay fa hivoaka amin’ny krizy isika hoy ny amiraly.
Jereo eto koa ny vidéos Antso mivantana PRM Magro 22/04/2011.
Miantso ny FFKM ny HMF
Auteur Solo Razafy*Publié le 22 avril 2011 24 avril 2011 Catégories Magro, Malagasy, Politique
Précédent Article précédent : Comment ne pas ressentir du dégoût
Suivant Article suivant : Videos Magro 22/04/2011 – Antso Mivantana